Namoota haleellaa Maaykaardraatti raawwatame irratti miidhamanii hoospitaala Gondar keessatti yaalamaa jiran, Sadaasa 20, 2020
Magaalaa Maaykaadraa keessatti namoonni nagaan yoo xiqqaate 600 tahan ajjeesamuu Koomishiniin Mirga Namoomaa kan Itiyoophiyaa dhiheenya gabaasee jira. Komiishinichi haleellaa gaggeeffame sana booda garee qorannaa tokko gara naannoo sanaatti erguun dhiittaan mirga namaa hamaan raawwatamuu mirkaneeffachuu isaa ifa godhe jira.
Haleellaan sun milishaa Tigraayiin kanneen deggeramanii fi yeroo sanatti aangoo irra kan ture caasaa bulchiinsa nageenyaa akkasumas garee dargaggootaa kan caasaa naannoo keessa hin jirree fi Saamrii jedhamuun ta’uu ifa godhee jira.
Caasaan qunnamtii kam iyyu naannoo Tigraay keessaa hojjataa waan hin jirreef jecha dhimma kana irratti deebii aangawoota Tigraay argachuun hin danda'amne jedhaee jira.
Waajirri Komunikeeshinii bulchiinsa naannoo Tigraay dhimma kana irratti ammaan dura VOAf deebii kenneenTigraay irratti dugguggaa sanyii hamaa gaggeessuuf jecha beekaa oduu facaafamee jechuun himata Tigraay irratti dhiyaate kun sona jedhee jira.
Gabaasaa Tsiyoon Girmaa Caqasaa